विश्वासको बाटोमा सात कदम | Apg29
विश्वासको बाटोमा आफ्नो पहिलो कदम।
यस लेखमा येशूले प्राप्त गरेका र सुरक्षित थिए गर्नेहरूका लागि लेखिएको छ।
म के तपाईं येशू प्राप्त गरेका र सुरक्षित भयो भनेर बधाई गर्न चाहनुहुन्छ सुरु गर्न! यो कुनै पनि मानिसलाई हुन सक्छ कि सबै भन्दा राम्रो कुरा हो। अब येशू ख्रीष्टको साथमा नयाँ शानदार लागि जीवन सुरु हुन्छ।
पनि सबैभन्दा लामो यात्रा एक कदम सुरु, कसैले भन्यो। यो विश्वास पैदल आउँदा यो विशेष महत्त्वपूर्ण छ। अब लागि सुरक्षित छन् र स्वर्ग जाँदै, यो तपाईं अब पूर्णतया विश्वास दुनियाँमा विकसित मतलब छैन। तर अब यो सबै सुरु हुन्छ। अब तपाईंले विकास र पनि अधिक येशूले थाहा सिक्न सक्छौं।
यस नवजात विचार: उहाँले राम्रो पूर्ण विकसित छैन? उहाँले तुरुन्तै, चलाउन हाम फाल्न, नृत्य र चालु दौड कार सुरु गर्न सक्दैन? होइन, तर उहाँले बढ्न गर्न अनुमति दिएको छ भने, अभ्यास यो उहाँको लागि समय जब त शायद उहाँले दौड कार चलाउन सक्नुहुन्छ सुरु गर्नुहोस्।
यो पुस्तिका विश्वासको बाटोमा आफ्नो पहिलो कदम बारे हुनुपर्छ। तपाईं अब ख्रीष्टको जन्म हुनुहुन्छ किनभने तपाईं पूर्ण विकसित छैन। जस्तै बच्चा तल पतन र हिट यो, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं असफल। तर हरेस छैन। उठ र विश्वासको बाटोमा येशूसित मा जाने!
तपाईं पहिले नै लिइएको छ पहिलो चरण। जब तपाईं येशू आफ्नो मनमा आउन आग्रह थियो।
रोमी अध्याय 10 र पद9यसो भन्छिन्:
"तपाईंले आफ्नो हृदयमा येशूले प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार र विश्वास भने परमेश्वरले उसलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो, तपाईं सुरक्षित गरिनेछ।"
बस सुरक्षित शब्द "सुरक्षित" मतलब! तिनीहरूले कुनै पनि, उत्साही keen र उत्साहित छन् कि होइन। म येशू पाउँदा, म बस सुरक्षित थियो - सुरक्षित!
सुरक्षित - के बाट? तपाईं पापबाट र अनन्त नरक गुमाए हुनबाट, अन्य कुराहरु, बाँचे!
बचत गर्न, एक येशूले प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले ठूलो स्वरले स्वीकार र परमेश्वरले येशूलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो भनेर विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईंले यी दुई आवश्यकताहरु पूरा भने, तपाईंले अब सुरक्षित छन् भन्ने 100% निश्चितताका साथ थाहा हुनेछ। तपाईं कसरी थाह पाउन सक्नुहुन्छ? ठीक छ, बाइबल त भन्छन् किनभने! यो जस्तै कुराहरू आउँदा यो बाइबल विश्वास गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं कहिल्यै भावना भनिरहेका छन् के जान सक्नुहुन्छ। भावना सक्नुहुन्छ एक दिन, "ओह, म सुरक्षित छु भनेर कसरी अद्भुत," र दोस्रो दिन, शायद तिमी साँच्चै तपाईं सुरक्षित छन् भन्ने महसुस छैन भन्छन्। यसलाई
"महसूस" तर के बाइबल वास्तवमा भन्छन् बारेमा छैन! तपाईं यो सरल नियम संग रहन हुनेछ त यो विश्वासको बाटो मा तपाईं को लागि राम्रो जानेछ।
विश्वास पैदल यात्रा मा, तपाईं विभिन्न setbacks भेट हुन सक्छ। त्यसपछि यो येशूले लीन महत्त्वपूर्ण छ। के तपाईं त्यसो भने, यो बाटो जानेछ र विश्वास बलियो हुन्छ।
त्यहाँ मान्छे जब परीक्षा र सङ्कष्ट दुई प्रकारका छन्। तिनीहरूलाई येशूको भाग्न। दोस्रो येशूलाई भाग्न। येशूले टाढा भागिरहेका गरिएन र विश्वास को दूर झर्ने। जहाँ सट्टा येशू भागिरहेका र विश्वास बलियो हुन्छन्।
बच्चालाई हिंड्न सिक्न हुनेछ, त्यो असफल हुनेछ। उहाँले गिर र बसोबास हुनेछ। तर उहाँले अझै पनि हठी हुन, उठ र फेरि प्रयास गर्नेछ। यो नियम तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईं विश्वासको बाटो मा गिर हुन सक्छ। त्यहाँ झूठ र उदास थियो छैन। प्राप्त, क्षमा परमेश्वरको सोध्न र येशूको मा सार्न अप।
तपाईं आफ्नो सामान संग पक्कै केही कुराहरू छन् नयाँ विश्वासी र राम्रो छैन भन्ने। यस सन्दर्भमा, यो सबै सही हुनेछ। के तपाईं येशू पालना र उहाँलाई हिंड्न पर्छ। कुरा उहाँले तपाईंलाई यो समय जब छुटकारा गर्न मदत गर्नेछ आफ्नो सामान राम्रो छैन। के तपाईं येशू स्वीकार र सुरक्षित थियो सबै एकैचोटि गायब थिएन, तर यो समय संग गायब हुनेछ। यो पवित्रीकरण भनिन्छ अर्को शब्द को लागि यो छ।
म पनि पछि यसलाई नयाँ विश्वासीहरूलाई ढिलो लागि धेरै साधारण वा एक hefty पक्कै आक्रमण प्राप्त हुनेछ यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। हो, यो मात्र सामान्य छ, तर यो सधैं त छ! यो पछि आउन सक्छ, प्रारम्भिक हुन, तर यसले सक्छ!
हामी येशूको पछि वा उनको पुरानो जीवन फर्केर जान जारी गर्ने हो भने यो पक्कै आक्रमणमा अन्त हुनेछ। तपाईं विश्वास रूपमा येशूको चयन भने बलियो र स्थिर हुन!
उहाँले खाना प्राप्त छैन भने बच्चा मर्नेछन्। यस्तै मा तपाईं संग छ। तपाईं आध्यात्मिक भोजन आवश्यक छ। तपाईं यसलाई प्राप्त गर्छन्, तपाईं आध्यात्मिक malnourished हुनेछु र अन्ततः आफ्नो विश्वासमा आध्यात्मिक मर्छन्।
खाना तपाईं कसरी प्राप्त गर्छन्? तपाईं विभिन्न तरिकामा भोजन प्राप्त गर्न सक्छन्। अन्य कुराहरु, तपाईं आफैलाई खान सक्छ। के तपाईं बाइबल पढेर यो। तपाईं बाइबल पढ्न नयाँ हो भने, म नयाँ नियममा (बाइबल को अन्य भाग हो जो) मा सुरु गर्न, र मार्क सुसमाचारको मा पढ्न सुझाव दिन्छौं। यो सुरु गर्न छ। त्यसपछि, को पाठ्यक्रम, सम्पूर्ण बाइबल पढ्न जारी।
त्यहाँ जो ढाक्न आवरण देखि बाइबल पढ्न प्रयास ती छन्। नयाँ विश्वासीकोरूपमा, यो गर्न कठिन छ। कृपया पढ्नुहोस् पुरानो नियमका (बाइबल को पहिलो भाग हो जो) को एक अध्याय र नयाँ नियममा हरेक दिन जारी छ। त्यसपछि तपाईं आफ्नो विश्वास बढ्नेछ भन्ने देख्नु हुनेछ।
तपाईं पनि सेवा भइरहेको द्वारा खाना प्राप्त गर्न सक्छन्! तपाईं परमेश्वरको र बाइबलीय येशूको सबै शब्द प्रचार गर्ने एक मसीही मण्डली गएर के प्राप्त! म तपाईं कहाँ रहछन ईलाका मा एक चर्च सम्पर्क गर्न सुझाव दिन्छौं। तपाईं एक चर्च जाने छैन त्यसैले म सम्पर्क तपाईंलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी हुन सक्छ। वा, तपाईंले भरोसा गर्ने सुरक्षित मसीही बारी भने। त्यसैले, उहाँले पक्कै पनि तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्मेलन सिक्न सही छ भने कसरी थाहा छ? - तपाईं चिन्तित हुन पर्दैन, प्रभु येशू स्वीकार।
प्रार्थना गर्दा सुरु!
र म तपाईंलाई आफ्नो मुख येशूले निःशुल्क हुनुहुन्छ भनेर अर्थ। येशूले तपाईं र उहाँले सुरक्षित छ
तपाईं सङ्गति गर्न चाहन्छु। उहाँले तपाईंलाई कुरा गर्न चाहन्छ र तपाईं उसलाई कुरा गर्न प्राप्त गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं कसैलाई प्रेम भने, तपाईं पाठ्यक्रम भन्ने व्यक्ति कुरा गर्न प्रयास गर्न। यस्तै मा येशूले छ। तपाईं कुनै पनि धार्मिक मांसपेशीमा फाटो वा तनाव गर्न आवश्यक छैन। होइन, यसलाई प्राकृतिक थियो। हरेक दिन उहाँलाई कुरा। तपाईं यसलाई र उसलाई समय बिताउन भन्छन्। उहाँले रुचि छ।
म यहाँ सबै प्रार्थना रहस्य मा राम्ररी लाग्न सक्दैन, तर म एउटा कुरा तपाईंलाई प्रोत्साहन गर्न चाहनुहुन्छ: परमेश्वरले तपाईंलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छ। उहाँले बाइबलमा यो धेरै पटक भनिएको छ।
अध्याय 21 र पद 22 मा येशूले यो मत्ती सुसमाचारको भन्छन्:
"तपाईंलाई लाग्छ रूपमा तपाईंले जे प्रार्थनामा सोध्न तपाईं पाउनेछ।"
येशूले के तपाईं लागि अनुरोध केहि बारेमा प्रार्थनाको प्राप्त गर्न सक्छन् त यहाँ भन्छन्!
के तपाईं येशू प्रार्थना गर्न सक्छौं, तर येशूले पनि येशूको नाम मा पिता सीधा प्रार्थना गर्न प्रोत्साहन दिन्छ। रूपमा प्रार्थना गर्न जवाफ प्रतिज्ञा! यस्तो प्रतिज्ञा येशूले यूहन्ना अध्याय 16 र 23 पद मा भन्छन्:
"त्यो दिन मा तपाईं केहि बारेमा मलाई सोध्न हुनेछ। उहाँले तपाईंलाई दिनुहुनेछ तपाईंले जे मेरो नाम मा पिता सोध्न ": आमिन, आमिन, म तिमीहरूलाई भन्दछु।
उहाँले तपाईं सुरक्षित छ भनेर परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्न नबिर्सनुहोला। येशूले लागि के गर्नुभएको छ को लागि धन्यवाद दिनुहोस्। मृत्यु कि र पुनरुत्थान हुनुभएको थियो। उसले आज जीवित छ र उहाँले आफ्नो सबै पाप क्षमा भएको छ कि। त्यसपछि
यो साँचो हो र आफ्नो विश्वास बलियो हुन्छ।
जब तपाईं सोध्नुपर्छ? तपाईं पहिलो बाइबल प्राप्त जवाफ थिस्सलोनिकी अध्याय5र पद 17:
"निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्।"
प्रेरित अध्याय2र पद 38 पत्रुस तिनीहरूले के थियो के मान्छे प्रतिक्रिया:
"पत्रुस, जवाफ 'पश्चात्ताप र आफ्नो पाप क्षमा हुन सक्छ भनेर येशू ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा। र तिमीहरूले एक उपहार रूपमा पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नेछ। ' "
त्यसपछि सबैले पश्चात्ताप थियो र सबै बप्तिस्मा लिए। परमेश्वरको वचन तपाईं आफैलाई बप्तिस्मा दिनुपर्छ भन्छन्। उपहार रूपमा पवित्र आत्माले प्रदान गर्न: तपाईंले यो के गर्दा, तपाईं पनि एउटा प्रतिज्ञा छ! पश्चात्ताप बप्तिस्मा र एक उपहार रूपमा पवित्र आत्मा: बाइबल मा पटक यी तीन कुराहरू मुक्तिका समावेश।
तपाईं आफैलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा दिनुपर्छ। तपाईं कुनै पनि चर्च नाम छैन तिमीलाई बप्तिस्मा, तर यो येशूको नाम छ। र तपाईं बप्तिस्मा न त व्यक्तिगत केहि गर्न, तर यो येशूको अझै पनि छ।
के तपाईं बाइबल रोमी अध्याय6मा भन्छन् र पद 3-4 रूपमा त्यसपछि फेरि माथि पानी मा पूर्ण जोडतोडले र भइरहेको द्वारा बप्तिस्मा छन्:
"तपाईं ख्रीष्ट येशूको बप्तिस्मा गरिएको छ जसले हामीलाई सबै आफ्नो मृत्यु मा बप्तिस्मा थाहा छैन? त्यसैले हामी मृत्यु मा बप्तिस्मा द्वारा हो: उहाँसित गाडे, हामी पनि नयाँ जीवन, ख्रीष्टको पिताको महिमा गरेर मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको थियो जीवन बिताउन सक्छ। "
बप्तिस्मा तपाईं अब येशूले हौं भन्ने वातावरण को एक स्वीकार छ। तपाईं येशू ख्रीष्टको बप्तिस्मा छन् सधैं उहाँलाई आबद्ध गर्न! बप्तिस्मा तपाईं अब परमेश्वरको पश्चात्ताप गरेको एक चिनारी हो।
मार्क अध्याय 16 र पद 16 मा येशू भन्नुहुन्छ:
"जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा सुरक्षित हुनेछ, तर जसले विश्वास गर्दैन निन्दा गरिनेछ।"
उपहार रूपमा पवित्र आत्मा प्राप्त! म पहिले नै छोयो यो चरण। तपाईं मसीही जीवन बिताउन र येशू तपाईं के आज्ञा छ गर्न शक्ति आवश्यक छ। तपाईं पनि येशूले आफ्नो दैनिक पैदल मदत गर्न आवश्यक हुनेछ।
यूहन्ना 14 अध्याय र पद 16-17 येशूले यसो भन्छिन्:
"अनि म त्यो दुनिया प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई छैन सत्य, आत्मा, तपाईं संग पालन गर्न सक्छ भन्ने पिताले प्रार्थना गर्नेछ, र उहाँले तपाईंलाई अर्को सान्त्वनादाता पर्छ। संसारको लागि उहाँलाई देख्नुहुन्छ न त उसलाई थाह छ। उहाँले तपाईंलाई रहन्छ र तपाईं हुनेछ किनभने तपाईं उसलाई थाहा छ। "
यहाँ यो संसार सान्त्वनादाता प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर भन्छन्, तर यो के तपाईं येशू विश्वास गर्न अनुमति दिन्छ। पवित्र आत्मा विश्वास द्वारा स्वीकार गर्ने वरदान हो। एउटै तरिकामा तपाईं येशू प्राप्त!
यसलाई प्रेरित अध्याय2र पद4मा भन्छन् रूपमा तपाईंले पवित्र आत्मा प्राप्त गरेका ताकि तपाईं अन्य भाषामा बोल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ:
"अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिएको र आत्मा तिनीहरूलाई कथन दिए रूपमा अन्य भाषामा बोल्न थाले थिए।"
सबै पवित्र आत्माले भरिएको र सबै भाषा बोल्न थाले थिए। अन्य भाषाहरूमा बाइबल अरू ठाउँमा भन्छन्। उदाहरणका लागि, पद 45 र 46 मा दशौं अध्याय प्रेरित:
"जसले पत्रुस आएका सबै विश्वासी यहूदीहरू छक्क थिए
पवित्र आत्मा उपहार पनि अन्यजातिहरूको मा खन्याइएको। थियो तिनीहरूले सुने तिनीहरूलाई अन्य भाषामा र परमेश्वरको प्रशंसा बोल्न। "
प्रेरित अध्याय 1 र पद 8 मा येशू भन्नुहुन्छ:
"तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउँछ जब, र तिमीहरू यरूशलेममा र सबै यहूदिया र सामरियाका मेरो साक्षी हुनेछ, र पृथ्वी निम्ति।"
येशू ख्रीष्टमा आफ्नो विश्वास अरूलाई बताउने। छैन आफैलाई यो राख्नुहुन्छ। तपाईं क्षमा सुरक्षित र अनन्त जीवन छ गरिएका छन्। अरूलाई पनि एउटै कुरा अनुभव गरौं।
प्रेरित अध्याय4र पद 20 यो अचम्मको स्वीकार भन्छन्:
"हामी, हामी हाम्रो भाग को कुरा गर्न सक्दैन देखेको र सुनेका के।"
येशूको बारेमा अन्य बताउन आत्म-बढ्न र आफ्नो विश्वास बलियो बन्ने भन्दा राम्रो र सबै भन्दा प्रभावकारी तरिका हो।
त्यसपछि शाऊलले पछि पल नाउँ, सुरक्षित थियो उहाँले तुरुन्तै पुष्टि र येशूको बारेमा तिनीहरूलाई बताउन थाले। यो एक परिणाम स्वरूप, उसले धेरै शक्ति पायो। तपाईं प्रेरित9र पद 22 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ:
"तर शाऊलले थप र थप शक्ति र येशूलाई मसीहको छ कि साबित रूपमा, दमस्कस मा बस्ने यहूदीहरूको भयो।"
येशूको लज्जित छैन। जब तपाईं आफ्नो विश्वासको लागि खडा, मानिसहरू आदर हुनेछ। के तपाईं येशू द्वारा पूरा भएको छ।
"के को लागि हृदय, मुख बोल्छ भरिएको छ।"
यो येशूले हामी-उत्साही यस्तो हो भन्ने कुरा छ भने पद 45 मा लूका छैटौं अध्यायमा भन्छन् फुटबल, त्यसैले हामी कुनै समस्या हाम्रो साथीहरूसँग यो कुरा छ। हामी कुनै पनि तरिकामा प्रयास नगर्नुहोस्। यो सिर्फ मा बग्छ। अब, को पाठ्यक्रम, येशू हाम्रो जीवनमा परिवर्तन। छैन हामी अन्य मानिसहरूलाई उहाँको बारेमा बताउन गर्नुपर्छ?
जो हुन्छ: येशू समात्नुहोस्! छैन केहि तपाईं उसलाई छोड्न प्राप्त गरौं गर्छन्। उहाँले तपाईंलाई भएको छ कि सबै भन्दा राम्रो कुरा हो!
तपाईं धेरै अन्त सम्म येशू संग रहन हुनेछ, तिमी स्वर्ग मा ली vets मुकुट प्राप्त हुनेछ! यो येशूको प्रकाश3र पद 11 यसो भन्छ:
"म चाँडै हुनेछ। कुनै एक आफ्नो मुकुट हुनेछ भनेर तपाईं के छ पकड। "
यी सबै सात कदम बस थालेका छन्। जहाँ यो हुन्छ यो छ:
- येशूले हिंड्न थालेका छ!